Maalinta: Febraayo 5, 2020
Marka laga soo tago madaar, Madaarka Istanbul, oo loogu talagalay in lagu noolaado, ayaa albaabada u fura ganacsatada bulshada dhexdeeda xaddiga "IGA Social Hackathon" (Social Hack). Ganacsatada bulshada, naqshadeeyayaasha garaafyada, dhexdhexaadiya inta u dhaxaysa 20-22 Maarso 2020 [More ...]
Dowladda Hoose ee Ankara, oo si dhaw ula socota horumarka tikniyoolajiyada iyo nidaamyada magaalada ee caqliga leh, ayaa mid cusub ku soo kordhisay barnaamijyadeeda taxanaha ah. Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay soo aruurisaa dalxiisayaal maxalli ah iyo kuwo ajaanib ah oo imanaya magaalo-madaxda iyo magaala-madaxda. [More ...]
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kayseri Inc. iyo heshiis shaqaale shaqaaleeed, oo ay ku jiraan 1150 shaqaale, ayaa la saxeexay xafladda. Isaga oo ka hadlaya xafladda saxiixa, Dawladda Hoose ee Magaaladda [More ...]
Darawalka baska, oo lug ku lahaa dagaalka u dhexeeya rakaabkii 'cunitaanka Nucleus' ee baska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee Bursa, ayaa laga saaray waajibaadka. Bayaanka lagu soo saaray mowduuca, “Maanta qaar ka mid ah qaybaha warbaahinta iyo kanaalada warbaahinta bulshada ayaa si gaar ah loo leeyahay [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, tirooyinka on koritaanka ururada caalamiga ah ayaa sheegay in Turkiga ee 2019 intii ka eegay dhowr jeer hilib, "Waxaan u malaynayaa in this sii wadi doontaa in 2020 dib. this [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa muwaadiniinta ku casuumay xafladda Daaweynta Caalamiga ah ee Sky wuxuuna ku dhawaaqay in ka qeyb galayaasha caalamiga ah la qaban doono markii ugu horreysay sanadkan. Wasiir Varank, ayaa bartiisa Twitter-ka, ku qoray Agoosto 20-23-ka Antalya Saklıkent [More ...]
Cengiz İnşaat wuxuu saxeexay 98,5 milyan oo lacagta tunnel-ka ah oo loogu tala galay dhismaha wadada labaad ee Karawaski Tunnel oo laga furayo Slovenia inta udhaxeysa Slovenia iyo Austria. Cengiz İnşaat, shirkadda wadooyinka Sloveya DARS 3 [More ...]
Marka loo eego baaxadda "TCDD Saadka Korantada Lafagurista Nidaamka Falanqaynta Nidaamka iyo Mashruuca Daraasadda Sawirka Ganacsiga" waxaa lagu fuliyay iyada oo lala kaashanayo Agaasimaha Guud ee TCDD iyo TÜBİTAK TÜSSİDE, "Saadka, oo ay ku lug leeyihiin dadweynaha, akadeemiyadda iyo daneeyayaasha waaxda gaarka loo leeyahay. [More ...]
Golaha Magaalada Afyonkarahisar wuxuu qabtay kulankiisa Feebarwari. Duqa magaalada Mehmet Zeybek, oo khudbadii furitaanka kulanka ka hadlay ayaa u mahad celiyay Eebe, ehelkeena iyo qarankeena, [More ...]